विभिन्न कामकाज पूरा नहुँदा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको::KhojOnline.com
विभिन्न कामकाज पूरा नहुँदा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष हुन् महेशकुमार अग्रवाल । उनी सेज सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् । भैरहवास्थित निर्माणसम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को उद्घाटन भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर, उक्त सेज सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । उत्पादन तथा निर्यात बढाउने एवं आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको सेजको अवधारणा भैरहवामै अड्किएको छ । खासगरी ऐन नआउादा तथा पूर्वाधार पूरा नहुँदा सेज सपना अधुरै रहेको उनले बताए । अग्रवालले सरकारी तहबाट हुने विभिन्न कामकाज पूरा नहुँदा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको जिकिर गरे । सेज सञ्चालक समितिका सदस्य अग्रवालले सञ्चालनका बाधा यसरी वर्णन गरे : सेजको पृष्ठभूमि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याउन सकिए मुलुकमा औद्योगीकरणको आधार खडा हुने थियो । सेजको अवधारणा भित्रिएको करिब १५ वर्षपछि अघिल्लो वर्ष भैरहवामा निर्माणसम्पन्न सेजको उद्घाटन गरिएको थियो । तर, विभिन्न कारण उक्त सेज अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भैरहवाको सेजमा न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रने सम्भावना देखिएको थियो । यसबाट मुलुकको उद्योगको संख्या ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने, १५ हजारले रोजगारी पाउने तथा १० प्रतिशत निर्यात बढ्ने हाम्रो अनुमान छ । भैरहवाको सेजबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा सबै प्रक्षेपण कागजमा सीमित भएका छन् । सेज सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । सेज सञ्चालनमा आउन नसक्नुका ९ वटा कारण यहाँ उल्लेख गर्दछु : १ . ऐन नआउनु लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने वा आश्वस्त पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्बन्धित क्षेत्रको ऐन कानुन हो । सेजको कानुन ल्याउने भनेको पनि झन्डै एक दशक नै भइसकेको छ । तर, अझै आउन सकेको छैन । सेज कानुन नआएसम्म सेजबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा उद्योगीले पाउन सक्दैनन् । ऐन नआएसम्म सेजको अवधारणा नै पूरा हुन सक्दैन । यसर्थ, लगानीकर्ता सेज ऐन कुरेर बसेका हुन सक्छन् । २. अस्पष्ट कार्यविधि सेज सञ्चालनलाई ल्याइएको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ पनि अस्पष्ट छ । जसका कारण पनि सेजमा आकर्षण नदेखिएको हो । खासगरी सञ्चालन स्वीकृति, जग्गाको भाडा, बिजुलीको व्यवस्थापनलगायत विषयमा कार्यविधि स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले सेज विकास समितिले उक्त कार्यविधि परिमार्जनको तयारी पनि गरिरहेको छ । अब अस्पष्ट सबै विषयलाई स्पष्ट पारिनेछ । कार्यविधि परिमार्जनले पनि सेज सञ्चालन गर्न ढोका खोल्नेछ । ३. भाडा बढी सरकारले ल्याएको कार्यविधिले निर्धारण गरेको भाडा महँगो भएको गुनासो आएको छ । सेजमा उद्योग स्थापनामा निर्धारण गरिएको जग्गाको भाडा अन्य मुलुकको भन्दा अत्याधिक बढी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा सेजको भाडा बढी भएको पाइएको छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन सकेन । सेजमा उद्योग स्थापनालाई प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँ मासिक भाडा लिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्दा सेजमा स्थापना हुने उद्योगले प्रतिप्लट सरदर मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त भाडा महँगो भएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कार्यविधि परिमार्जनपछि भाडादर पनि कम हुनेछ । ४. पूर्वाधार पूरा नहुनु भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अझै पनि कपितय पूर्वाधार तयार भएका छैनन् । विद्युत्, पानीलगायत पूर्वाधारको आधार अझै तयार भइसकेको छैन । उद्योग सञ्चालन गर्न बढी क्षमताको विद्युत् चाहिन्छ । प्रशासनिक कार्यालयलाई चाहिने विद्युत् छ । तर, उद्योगलाई चाहिने ४ सय ४० भोल्टको थ्री फेज लाइनको ‘मेकानिजम’ अझै बनिसकेको छैन । त्यस्तै, पानीको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि बनिसकेको छैन । यस्ता पूर्वाधारको अभावका कारण पनि लगानीकर्ताले सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि चासो नदेखाएका हुन् । ५. एकद्वार सेवा अपूर्ण सेजमा अझै पनि एकद्वार सेवामा पर्याप्त संयन्त्र बनिसकेको छैन । अझै पनि भन्सार, बैंक, सुरक्षालगायत निकायका शाखा त्यहाँ स्थापना भएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने त्यहाँ सेजको वास्तविक अर्थअनुसारको सुविधा खडा भइसकेको छैन । सेजको अर्थ त्यहाँबाट सबै सेवा प्राप्त गर्नु पनि हो । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले अन्यत्र सेवा लिन जानुपर्ने हुनुहुँदैन । अहिलेसम्म पनि भैरहवा सेजमा सरकारका सबै निकायको उपस्थिति छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताले सेजमा उत्साहपूर्ण रूपमा चासो दिएका छैनन् । ६. प्रचारप्रसार कम सेजमा उद्योग स्थापनालाई गरिएको आह्वानउपर थोरै मात्र प्रस्ताव परे । यसरी थोरै मात्र प्रस्ताव पर्नुमा धेरै कारण छन् । जसमध्येको एक प्रचारप्रसार नहुनु नै हो । सेजको पर्याप्त प्रचारप्रसार गरिएको छैन । स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्तालाई सेजको विशेषताबारे अवगत गराउन सकिएको छैन । अन्य स्थानमा भन्दा सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा लगानीकर्तालाई के–के फाइदा हुन्छ, के–के सुविधा त्यहाँ पाउन सकिन्छ भन्नेबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिन आवश्यक छ । सकिन्छ भने कुनै दुई/चार वटा मुलुकका लगानीकर्तासँग सामूहिक छलफल गर्नुपर्छ । यसले सेजमा लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ । ७. इच्छाशक्ति अभाव कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । सेज सञ्चालनमा सबैको उत्तिकै चासो देखिन्छ । तर, यसप्रति गम्भीर इच्छाशक्ति भने देखिँदैन । सरकार, मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रले पनि यसप्रति इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । ८ . भूकम्प र नाकाबन्दी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै तहसनहस पारेको छ । यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देखिँदै जानेछ । भूकम्प र नाकाबन्दीले सेज सञ्चालनमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । मुलुक नै ठप्प भएका वेला सेजका गतिविधि अघि बढ्ने कुरै भएन । खासगरी यसबीचमा पूर्वाधार विस्तार, कार्यविधि परिमार्जन, अन्य निकायको स्थापनालगायत काम रोकिएका छन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान पनि भूकम्प र नाकाबन्दीको व्यवस्थापनमा गएका कारण सेजमा उल्लेखनीय समय दिन सकिएको छैन । अब परिस्थिति सामान्य भएपछि सेजका गतिविधिले गति लिनेछन् । ९. लगानीको वातावरण नहुनु मुलुकमा लगानीको समग्र वातावरण राम्रो नभएसम्म कुनै पनि ठाउँमा लगानी आउँदैन । सुविधा बढी दिए पनि वातावरण राम्रो नभएसम्म लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । हाम्रो राजनीतिक तथा अन्य कारणले लगानीको वातावरण अनुकूल हुन सकेको छैन । अझै पनि लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्थामा छैन । हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिरहेका छौँ । तर, त्यसलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकासलाई अनुकूल वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ । जबसम्म मुलुकमा लगानीको वातावरण अनुकूल हुन सक्दैन तबसम्म सेजमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी आउँदैन ।